Qalbi-dhagax oo ka degay Nairobi | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qalbi-dhagax oo ka degay Nairobi
Sarkaalka ONLF ee lagu magacaabo C/kariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) oo ka soo duulay magaalada Addis-ababa ee dalka Itoobiya ayaa xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo loogu sameeyay soo dhaweyn heer sare ah.
Siyaasiga C/kariin (Qalbi-dhagax) oo Khamiistii ina dhaaftay laga sii daayay xabsi ku yaalla magaalada Addis-ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta ku soo dhoweeyay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo uu ugu horeeyo Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, Siyaasiga Faarax Macalin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Sida lagu arkay muuqaalo iyo sawiro la soo geliyay baraha bulshada dadweynaha ka qeyb qaatay soo dhaweynta C/kariin ayaa waxa ay wateen Calanka Soomaaliya, Sawirka (Qalbi-dhagax) iyo boorar ay ku qoran yihiin ereyo ay ka mid yihiin geesigeena soo dhawoow.
C/kariin Qalbi Dhagax ayaa markii uu gaaray Nairobi ka mahadceliyay soo dhoweynta loo soo sameeyay, isagoo gacan qaaday dadweynihii soo dhoweeyay, wuxuuna xalay si gaar ah kulamo ula yeeshay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta soo dhaweeyay.
Xildhibaan Fiqi ayaa sidan yiri “Waxaa ilaah mahadiis ah inaan walaalkeen halgamaa C/karim Sh. Muuse Qalbi Dhagax aan ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed ee caawa ku soo dhoweeyey garoonka JKIA ee Nairobi.”